तल्लो पेट दुखेर आत्तिएकी बालिकाको एक्सरे गर्दा तीनवटा मिर्गौला भेटियो – Nepali Health
तल्लो पेट दुखेर आत्तिएकी बालिकाको एक्सरे गर्दा तीनवटा मिर्गौला भेटियो
२०७५ कार्तिक ११ गते ११:०५ मा प्रकाशित
चितवन, ११ कात्तिक । सामान्य त मानिसको शरीरमा दुईवटा मिर्गौला हुन्छ । तर चितवनमा तीन वटा मिर्गौला भएकी एक बालिका भेटिएकी छन् ।
भरतपुर महानगरपालिका – ११ स्थित गणेशस्थान बस्ने १२ बर्षीया बालिका आरती विकको शरीरमा तीन वटा मिर्गौला भेटिएको हो । चिकित्सकका अनुसार उनको तीनवटै मिर्गौला काम गर्ने अवस्थाकै हो ।
गत साता तल्लो पेट दुखेर उपचारका लागि स्थानीय एक अस्पतालमा पुगेकी बालिकाको एक्सरे गर्दा तीन वटा मिर्गौला भएको पत्ता लागेको थियो । तीन वटा मिर्गौला भएको पाइएपछि उनलाई क्लिनिकका स्वास्थ्यकर्मीले पुरानो मेडिकल कलेज रिफर गरेका थिए ।
‘हो उनको दायाँ तर्फ दुईवटा र बायाँ तर्फ एउटा मिर्गौला रहेका छन् । र ती तीनवटै मिर्गौलाले काम गरिरहेका थिए,’ पुरानो मेडिकल कलेजका युरोलोजिष्ट डा. सुदिप केसीले भने ।
उनका अनुसार तेस्रो मिर्गौला दाँया मिर्गौलाको केही तलपट्टी केही सानो आकारमा रहेको छ । त्यो मिर्गौलाले पनि अरु मिर्गौलाले जस्तै रगत छान्ने र पिसाव बनाउने काम गरेपनि अहिले समस्या सोही मिर्गौलामा देखिएको छ ।
‘सो मिर्गौला अलिकति सुन्निएको जस्तो थियो । त्यसमा जोडिएको पिसाव नलिहरु साँघुरिदै जाँदा यस्तो भएको हो । हामीले गत शुक्रबार नै सानो अप्रेशन गरी सो समस्या हटाउने प्रयास गरेका छौँ । सम्भवत एक दुई दिन पछि ठिक भएर डिस्चार्ज हुनसक्छ,’ डा. केसीले भने ।
डा. केसीले प्रति एक लाखमा एक जनामा यस्तो समस्या आउन सक्ने बताए ।’ कसैको एउटा मिर्गौला हुन्छ कसैको तीनवटा कसैको चार वटा पनि मिर्गौला हुनसक्छ । तर यस्ता केशहरु दुर्लभ हुन् । प्रति लाख जनसंख्यामा एक जनामा हुनसक्छ,’ उनले भने ।
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा डाक्टर नर्स सहित विभिन्न पदमा ३० जनाका लागि अवसर